Sat, Aug 24, 2019 | 10:30:38 NST
प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गरे हुन्छ, एमालेलाई केही भन्नुछैन : विष्णु पौडेल
माघ २७ गते देशले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पायो । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राष्ट्रपतिका विषयमा जुन ढंगले विवाद भैरहेको थियो,त्यसले सहजै नयाँ प्रधानमन्त्री मुलुकले पाउला भन्ने लागेको थिएन । तर मुलुकले प्रधानमन्त्री पाए पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन् ।
रेडियोहरुले वडापत्र जारी गर्नुपर्छ – बरिष्ठ पत्रकार कसजू
बिहीबार देशभर अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो दिवस मनाइएको छ । यसै अवसरमा बरिष्ठ पत्रकार विनयकुमार कसजूसँग गरिएको कुराकानी ।
सुटिङसँगै हाम्रो ‘इलु इलु’ पनि सकियो : बेनिशा हमाल
चलचित्र ‘स्वर’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी नायिका बेनिशा हमालले अहिलेसम्म एकसयवटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकीछन् भने पाँचवटा चलचित्रमा आफ्नो अभिनयको कला देखाइसकेकी छिन् ।
खोरेत गाई, भैंसी, भेडाबाख्रा वा बंगुर लगायतका जनावरमा देखिने सरुवा रोग हो । यो सरुवा रोग भएका कारण जनावर आवतजावत गर्दा वा हावापानीले एकबाट अर्को जनावरमा छिट्टै सर्ने सम्भावना हुन्छ ।
सहकारी किनबेच गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : रजिष्टार न्यौपाने
सहकारी सिद्धान्त अनुसार एक पटक दर्ता भएको सहकारी सस्था फेरी किनबेच गर्न पाईदैन् । तर अहिले सहकारी संस्थाहरु किनबेच गर्ने क्रम सुरु भएको छ । यसै सिलसिलामा सहकारी विभागका रजिष्टार केदार न्यौपानसँग गरिएको कुराकानी :
संविधानसभामा प्रचण्ड नेतृत्वको जस्तै समिति चाहिन्छ: अग्नि खरेल
अहिलेको संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने दलहरुको लिखित र मौखिक प्रतिवद्धता छ । तर के त्यो प्रतिवद्धता अनुसार काम होला ? त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ? उज्यालो अनलाइनका लागि बोमलाल गिरीले नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व सभासद अग्नि खरेलसँग गरेको कुराकानी:
नयाँ सरकारलाई सुनको किस्तीमा सुदृढ अर्थतन्त्र बुझाउँदैछु: अर्थमन्त्री
चुनाव गर्ने मुख्य उद्देश्यले गठन भएको अहिलेको सरकार आफ्नो उद्देश्यमा सफल पनि भएको छ । तर आर्थिक विकास र सुशासन कायम गर्ने पनि यो सरकारको प्रतिवद्धता थियो । के यसमा सफल भयो त ? उज्यालो अनलाइनका लागि कमल पराजुलीले अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालासंग गरेको कुराकानी:
‘राहदानी वितरणमा भएको ढिलाई छिटै हट्छ’
पछिल्लो समय नेपालका नियोग र राजदूतावासमार्फत हुने राहदानीको वितरण र नवीकरणको काममा ढिलाई भइरहेको छ । यसबाट विदेशमा रहने नेपालीलाई निकै नै समस्या परेको गुनासो आइरहेको छ ।
‘शून्यबाट काम गर्नु कुनै पनि हालतमा ठिक हुँदैन’
धेरैजसो दलले घोषणापत्र मार्फत नै एक वर्ष भित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । चार दलबीच भएको सहमती अनुसार पनि एक वर्ष भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने र गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्नेमा मुख्य दलहरुबीच नै एकमत छैन । यसै सन्दर्भमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोख्रेलसँग गरिएको कुराकानी :
इन्दिरा जोशीको चर्चा छुट्टै उचाइमा पुगेको छ । विविध विधाका गीत गायनसँगै शारिरीक सुन्दरता र प्रस्तुतिले गर्दा सधैं मिडियामा छाइरहने जोशी देश विदेशमा हुने स्टेज कार्यक्रमका लागि पहिलो रोजाइमा पर्नुहुन्छ । जोशीसँग उज्यालो अनलाइनका लागि मदन खनालले गरेको कुराकानी
मेरा सबै रेकर्ड तोडिउन् : बैकुण्ठ मानन्धर
बैकुण्ठ मानन्धर, नेपालको म्याराथन दौडमा बिर्सनै नसकिने नाम हो । नेपालको तर्फबाट ४ पटक ओलम्पिक ट्रयाकमा दौडिसकेका मानन्धरले सन् १९८७ मा राखेको राष्ट्रिय कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन ।
विना साधना संगीतमा आउनेको आयु छोटो हुन्छ –संगीता राना प्रधान
गायिका संगीता राना प्रधान, तीनदशक भन्दा लामो समयदेखि संगीत साधनामा हुनुहन्छ । थुप्रै लोकप्रिय गीतमा आवाज दिएकी राना धेरै संगीतकर्मीकी गुरुआमा पनि हुनुहुन्छ । जटिल गीत गाउन सक्ने गायिकाको रुपमा चिनिने उहाँसँग उज्यालो अनलाइनका लागि मदन खनालले गरेको कुराकानी :
राजेश हमालमा अर्को पाटो पनि रहेछ : अनुप बराल
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा महानायक भनेर चिनिने राजेश हमाल यतिबेला रंगमञ्चको अभिनयमा व्यस्त हुनुहुन्छ । भारतीय नाटककार स्वदेश दीपकको लेखन र रंगकर्मी अनुप बरालको निर्देशन रहेको नाटक ‘कोर्ट मार्सल’ मा हमालले सैनिक न्यायाधीशको भूमिका निभाउनुभएको छ ।
हामीले पनि बल्ड्याङ खायौं, तर हतास भएनौं : नेपाल
पहिलो संविधानसभा चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेका नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यसपटक काठमाडौं र रौतहट दुवै क्षेत्रबाट विजयी हुनुभयो । रौतहटको मुसहरवस्तीमा शुभकामना साटासाट गर्न व्यस्त नेपालसँग हामीले काठमाडौंबाटै टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थियौं ।
अब कलाकारले पनि राजनीति गर्नुपर्छ : भुवन केसी
नेकपा एमालेका समानु्पातिकका उम्मेदवार नायक भुवन केसी चुनाव प्रचारका लागि देश दौडाहामा छन् । यसै क्रममा उनी एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले उम्मेदवारी दिएको बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा प्रचारका लागि बिहीबार बर्दिया आइपुगे ।
नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिता अझै स्थापित भएको छैन : गाउँले
मंसिर ४ गतेको संविधानसभाको दोस्रो चुनावनजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको समाचार सार्वजनिक गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकार स्वयंले आचारसंहिता नमानेको कुरा पनि बाहिर आएको छ ।
चुनाव असफल पार्न जे आवश्यक पर्छ त्यही गर्छौं : पम्फा भुषाल
मंसिर ४ गते संविधान सभाको दोस्रो चुनाव हुँदैछ । तर यो चुनावसँगै मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दो छ । हिजो सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउने माध्यम बनेको संविधानसभा अहिले द्वन्द्वको कारण बन्ने पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रसँग बिदेशीले ‘डिल’ गर्ने वातावरण छैन : शेष घले
अष्ट्रेलियमा बस्दै आएका शेष घले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । आफू अध्यक्षमा चुनिए लगत्तै उहाँले पत्रकारहरुसित आफ्नो भावी योजनाका बारेमा कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यो कुराकानीलाई समेटेर उज्यालो अनलाइनलका लागि बिनोद चौलागाईंले तयार पारेको अन्तर्वाता :
मिश्रीत आधार सहितको ७ वटा प्रदेशको प्रस्ताव हामीले गरेका छौं : प्रदीप ज्ञवाली
नेकपा एमालले आगामी संविधान सभाको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको हो । एमालले संविधानसभामा एमालेको नीति एमालेकै नेतृत्व भन्ने मूल नाराका साथ घोषणा पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
रेखा थापालाई बोल्न आउँदैनः विराज भट्ट
अभिनेता बिराज भट्ट तीन वर्षदेखि नेपाली फिल्म छाडेर भोजपुरी फिल्ममा ब्यस्त छन् । उनी यतिबेला दशै मनाउन काठमाडौं आएका छन् । दशैसँगै हलमा लाग्न लागेको चलचित्र दामिनी’को प्रोमोसनमा खटेका छन् । उनै एक्सन हिरो विराज भट्टसँग उज्यालो अनलाइनका लागि अर्जुनकुमार संग्रौलाले गरेको कुराकानी:–
बैद्य ल्याउन रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्छ: प्रदीप ज्ञवाली
गएको शुक्रबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलका नेताहरुले ३३ दलीय मोर्चामा आबद्ध दलका नेतासँग एकचरण छलफल गरे । त्यस छलफलपछि चुनाबमा विपक्षी दलको सहभागीता र चुनाबको मिति लगायतका बिषयमा बिभिन्न अड्कलवाजीहरु हुन थालेका छन् । यसै विषयमा नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी:
म त्यती महँगो छैन : नम्रता श्रेष्ठ
सानो संसार, मेरो एउटा साथी छ, मिस यू, छड्केलगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी नायिका नम्रता श्रेष्ठलाई चलचित्र क्षेत्रमा निकै ‘फोटोजेनिक फेस’ भनेर पनि चिनिन्छ । आर्जेइङ, मोडलिङ हुँदै नायिका बनेकी नम्रतालाई अहिले चलचित्रको कामले भ्याइ नभ्याइ छ ।
खेलाडीको कन्फिडेन्स र एक्पोजर बढाउछौं : टंक आङबुहाङ
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अहिले दुईवटा विश्वकप छनोटको तयारीमा छ । विश्वकप क्रिकेट छनोटको तयारी कस्तो चलिरहेको छ त ? उज्यालो अनलाइनका लागि सेन्छेलुङ लिम्बू र सुफल काफ्लेले नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष टंक आङबुहाङसित गरेको कुराकानी:
ज्ञानेन्द्रले गीत गाएको ११ सय दिए : फत्तेमान
कालजयी गीतसँग जोडिने नाम हो, फत्तेमान राजभण्डारी । उहाँ अब यो संसारमा हुनुहुन्न । उहाँको सोमबारराती ७७ वर्षको उमेरमा निधन भयो । ७६ वर्ष पुरा भई ७७ वर्ष लागेको दिन गत मंसिर १३ गते उज्यालो सहकर्मी सिल्भिया राजोपाध्यायले राजभण्डारीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो । उहाँको त्यो अन्तिम जन्मदिनमा गरिएको कुराकानी सान्दर्भिक हुने ठानेर हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
ठूला दलका कुरा सुनिने भएकाले एमालेमा गएँ: सुनिलबाबु पन्त
सुनिलबाबु पन्त, नीलहिरा समाजका संस्थापक हुनुहुन्छ । पन्त हालै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ । समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका पन्तको एमालेमा प्रवेश लगायतका विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि विनोद ढकालले गरेको कुराकानी :
रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान यसपटक ४८ हजार युवाले आवेदन फारम भरेका छन् । यो सन् २०११ को भन्दा झण्डै ९ हजारले कमी हो । तर यो आवेदन तोकिएको कोटाभन्दा झण्डै ६ गुणा बढी हो ।
देश चुनाबमा गयोः प्रकाश, चुनाब हुन दिन्नौं: विप्लब
नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग वार्ता असफल भएपछि मंसिर ४ को चुनाव अन्यौलमा परेको छ । यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाइनका लागि दीपेन्द्र कुँवरले एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र नेकपा–माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाइ वार्ताको औचित्य सकिएको हो भनेर सोध्नुभएको छ :
गाईजात्रा होइन, महजात्रा गर्छौं : हरिबंश आचार्य
बिशेषतः आफ्नो कार्यक्रमले अरु नयाँ हाँस्य कलाकारको कार्यक्रमलाई असर गर्ने भएकाले आफूहरुले कार्यक्रम नगर्ने बताउने हाँस्य कलाकार हरिबंश आचार्यसँग गाईजात्रा र हाँस्य व्यंग्यका बारेमा गरिएको कुराकानी :
‘कोइरालाको नाक, प्रचण्डको जुँगा’
यसवर्षको गाईजात्रा छिट्टै आउँदैछ । गाईजात्रा भन्नासाथ जोडिने विधा हो, हास्यव्यंग्य । व्यंग्यको एउटा शैली हो, कार्टुन । कार्टुन र यसको प्रभावको विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि सिल्भिया राजोपाध्यायले कार्टुनिष्ट रविन सायमीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
विजुक्छे भन्नुहुन्छ–दोस्रो जनआन्दोलनको एजेण्डा गणतन्त्र थिएन
भारतको दिल्लीमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीका एक जना हस्ताक्षरकर्ता नारायणमान विजुक्छे ०६२–०६३ को आन्दोलनको एजेण्डा गणतन्त्र थिएन भन्नुहुन्छ । त्यसो आन्दोलनको एजेण्डा के थियो ? उहाँसँगको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुबारेको कुराकानी :
रेखा थापाको नाम राखेर मलाई प्रश्न नसोध्नुस् : आर्यन सिग्देल
नायक आर्यन सिग्देल राम्रो र स्वभाविक अभिनय गर्ने नायकको रुपमा चिनिन्छन् । प्रायः चलचत्रिमा ‘लभर ब्वाई’को रुपमा देखिने आर्यन बलिउडका सलमान खानबाट निकै प्रभावित छन् । निकै राम्रो पारिश्रमिक लिने नायकमा पर्ने नायक आर्यन सिग्देलसँग उज्यालो अनलाइनका लागि अर्जुनकुमार संग्रौलाले गरेको कुराकानी :
अभिभावक र शिक्षकबाटै बालस्वास्थ्यमा चुनौती : डा.शाक्य
जन्मेपछि बाबुआमा र घरपरिवारको काख, त्यसपछि विद्यालय बालबालिका हुर्कने र बढ्ने ठाउँ हुन् । घरमा अभिभावकले र विद्यालयमा शिक्षकहरुबाट उनीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ख्याल गरिनु पर्छ । तर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन किन त ?
पुलिस र अपराधिसँगै भेटिएपछि कसरी रोकिन्छ अपराध ?
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि मात्रै लगातार आक्रमण भइरहेको भन्दै सरकारसँग सुरक्षाको माग गर्नुभएको छ । फोरम अध्यक्ष यादव र उहाँको पार्टीका कार्यकर्तालाई कोबाट छ त असुरक्षा ? यसबारेमा उज्यालो अनलाइनलका लागि हिम विष्टले यादवसँग गरेको कुराकानी :
‘टपरी गायिका’ भन्दा वाक्क लाग्छ : गायिका आस्था रावत
पोहोर पनि ढाँट्यौं आमा यसपाली नी ढाँट्यौं । खै त मलाई झुम्के बुलाकी । हिजो आज यो गीत रेडियो टेलिभिजनमा खुबै घन्किन थालेको छ । यो गीत गाउनु अघि उनले चलचित्र र रिमिक्स गरि दुई दर्जन बढी गीत गाईसकेकी छिन् । उनै गायिका आस्था राउतसँग गरिएको कुराकानी ।
अहिले त नाममात्रको कम्युनिष्ट पार्टी भए : नरबहादुर कर्माचार्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकमध्ये एक नरबहादुर कर्माचार्यको बुधवार निधन भयो । यसवर्षको स्थापना दिवस बैशाख ९ गते उहाँसँग लिइएको अन्तर्वार्ता सान्दर्भिक हुने ठानेर यहाँ प्रकाशित गरिएको हो ।
दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट जित्ने लक्ष्य छ : पवन घिमिरे
नेपालको इतिहासमा सांगहरुले पनि विश्वकप खेल्न नसकेको अवस्थामा हामीले दृष्टिबिहीनहरुको विश्वकप क्रिकेट खेल्यौं । हाम्रो अबको लक्ष्य भनेको विश्वकप क्रिकेट जित्ने हो । सन् २०१५ मा हुने दृष्टिविहीनहरुको चौथो विश्वकपमा कम्तीमा सेमिफाइनल पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
काली यतिबेर गर्भमा छिन् अब दशैंमा स्वस्थ रुपमा जन्मिन्छिन्, सबैको प्यारो बन्ने छिन् । मानिसहरु ढिलो होस छोरो होस् भन्छन् तर म भन्छु ढिलो होस छोरी नै होस् । अझ काली नै होस तर सबैको प्रिय होस् ।
चुनाब विथोल्दैनौं, बहिस्कार गछौं
अहिले नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक पनि नजिकिएको छ । यस्तो अवस्थामा उसले कुन बाटो रोज्छ र चुनावको बारेमा उसको दृष्टिकोणबारे उज्यालो अनलाइनका लागि बोमलाल गिरीले नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
मेरी प्रेमिका मधु भट्टराई नै हुन : राजेश हमाल
हिजो आज नायक राजेश हमाल र विवाह पर्यायवाची बनेका छन् । जहाँ जहाँ राजेश हमालको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यहाँ उनको विवाह र प्रेम सम्बन्धको चर्चा हुन्छ । आफ्नो विवाह र प्रेम सम्बन्ध बारे के भन्छन् त हमाल ? उज्यालो सहकर्मी मदन खनालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
‘म अर्को जन्ममा देउता हुन्छु, देउतालाई मान्छे बनाउँछु’